Brain On Porn - "ငါသည်ငါ့ HOCD ကိုယဉ်ပါးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ"
OCD (ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်) ကိုအကြံပေးပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး OCD နှင့်ဆက်ဆံနေကြောင်းသိလိုက်ရသည်။ ငါ HOCD နှင့်ငါစစ်တိုက်သောအခါမကြာသေးမီကသည်အထိဖြစ်ပျက်သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူး။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါ reboot လုပ်ပြီးကတည်းကငါအရမ်းထိတ်လန့်သွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေချင်တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်နောက်ပြောင်ပြproblemနာသည် OCD မဟုတ်ဘဲ HOCD ဖြစ်သည်ကို ဦး စွာသဘောပေါက်ခဲ့သည်၊ နောက်တော့ငါဖျက်ဆီးတဲ့ OCD အတွေးတွေကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကျော်ပြီးကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ထိန်းချုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့မဟာဗျူဟာကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ ဒီမျောက်ဟာငါ့ကျောကိုချွတ်လိုက်ပြီလို့ရိုးရိုးသားသားပြောတယ်။ ဒါကမင်းကိုကူညီမလားငါမသိပေမယ့်အဲဒါကငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ HOCD ကိုမင်းအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါဝမ်းသာတယ်၊ ဒါပေမယ့် OCD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြproblemနာကမင်းရဲ့အတွေးထဲကရှုထောင့်တိုင်းကိုချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့နတ်ဆိုးလေးလိုပဲ။ ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေ၊
အဆင့် 1 - သင်၏ OCD ကို Personify လုပ်ပါ။ ၎င်းကိုသင်၏မျက်လုံးများရှေ့တွင်သင်မြင်နိုင်သည့်အချို့သောအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ မင်းသာငါနဲ့တူမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်တည်မှုဟာရုပ်ဆိုးပြီးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှာပါ။ ၎င်းအတွက်တိကျသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုတီထွင်ပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းသူကသားမွေးသို့မဟုတ် pointy နားရွက်သို့မဟုတ်အရုပ်ဆိုးသွားများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏မျက်လုံးများရှေ့တွင်ကြည့်ရှုပြီးသင်၏အမြင်မှသင်၏ ဦး ခေါင်းထဲသို့ခုန်ပေါက်ထွက်သွားရန်မပြတ်မတမ်းကြိုးစားနေသကဲ့သို့စောင့်ကြည့်ပါ။ အဲဒါကိုခွင့်မပြုပါနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဗျူဟာကငါကြည့်နေနိုင်အောင်အထူ plexiglass လှောင်အိမ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ OCD ကဒီအမုန်းကိုသွားလိမ့်မယ်။ ဒီဟာကိုနှစ်သက်ပါ ၎င်းသည်ထွက်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင်လိုအပ်သောမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆိုချုပ်ထားရမည်။ ၎င်းသည်သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအသုံးပြုရန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် OCD မဟုတ်ဘဲသင်၏စိတ်တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဟုသင်ကြားပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်“ စောင့်ကြည့်သူ” ဖြစ်လာပြီးသင့်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ OCD သည်သင်၏သတိကိုမလွှမ်းမိုးတော့ပါ။ အဲဒါကို“ မင်းကိုငါမြင်တယ်” လို့ပြောတာကအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာငါတွေ့ပြီ။ ဤအဆင့်သည် OCD ဝေဒနာသည်၏သတိမှစိတ်ကူးယဉ်ကိုဖယ်ရှားသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်၏သီအိုရီနှင့်အနည်းငယ်ဆန့်ကျင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် OCD တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြုံခဲ့ရလျှင်သင်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်နေသည်ဟုမှတ်ယူထားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ရှိနေစဉ်၎င်းကိုသင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုငါထင်သည်။
အဆင့် ၂ - OCD ကိုသင်၏ BITCH ဖြစ်စေပါ။ OCD သည်သင့်အားနှစ်ပေါင်းများစွာဝေဒနာခံစားနေရသည့်မာရ်နတ်၏ထောက်ခံသူ၏စကားသံဖြစ်သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲမလိုလားသောအတွေးများဖြင့်မင်းကိုနှိပ်စက်ခြင်းဖြင့်အမှန်တရားကို၎င်းတို့ကိုတကယ့်ကိုခံစားရနိုင်သောအလွန်ယုံလွယ်လွန်းသောကောက်ချက်ချမှုများကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာလိမ်လည်လှည့်ဖြားသည်။ ဒါကြောင့် MAD ရ! သင်၏ခွေးဖြစ်အောင်လုပ်ရန်သော့ချက်မှာဤသို့ပြောရန်ဖြစ်သည် -“ မင်းဟာမင်း X ဂိမ်းကိုကစားနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီ။ ငါပြီးပြီ။ မင်းရဲ့ဂိမ်းကစားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ” မင်းရဲ့ဂိမ်းကရိုးရိုးလေးပါ။ မင်းရဲ့ဘ ၀ ကိုအပြည့်အ ၀ အသက်ရှင်ပါစေ၊ ခဏမှာနေပြီးနေ့စဉ်စက္ကန့်တိုင်းကိုပျော်မွေ့ပါစေ။ OCD ကဒီအရုပ်ဆိုးတာကိုသံသယတွေနဲ့“ ဘာဖြစ်မလဲ? အဲဒါကိုချွတ်မယ်ဆိုတာသိပါစေ။ OCD ဂိမ်းမကစားပါနဲ့။ အကယ်၍ သင်သည်စိုးရိမ်မှုအချို့ရှိလာပြီးသင်ကိုယ်တိုင်သက်သေပြရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်ရန်သင်ဖိအားပေးခံရသည်ဟုခံစားရပါက၎င်းသည်စိုးရိမ်မှုသည်တရား ၀ င်မှုမဟုတ်ကြောင်းသင် OCD ဂိမ်းကိုကစားနေပြီးသင်ရှုံးသည်။ OCD နှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းမပြုပါနှင့်။ ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သိစိတ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်သင်ကဲ့သို့စမတ်ကျကြောင်းသတိရပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထက်သာအောင်လုပ်ခြင်းသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှ ပို၍ ကောင်းသည်မဟုတ်ပါ။ ထိုဂိမ်းကိုမကစားပါနှင့်၊ OCD နှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံရန်အချိန်ယူရခြင်းမဟုတ် - ဘဝသည်အလွန်အဖိုးတန်လှသည်။ တူသောတစ်ခုခုပြောပါ "Nice ခွေးကြိုးစားပေမယ့်သင်နောက်တဖန်ရှုံးသည်!" ယခုအချိန်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုအာရုံစိုက်ပါ။ မင်းဘယ်မှာလဲ? မင်းဘာလုပ်နေလဲ? အခုအချိန်မှာဘယ်ပြproblemနာကိုခင်ဗျားရင်ဆိုင်နေရလဲ။ စစ်မှန်တဲ့အဖြေကအမြဲတမ်းပြNoနာမရှိဘူး။
ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှဒီမှာနှင့်ယခုနေဖို့။ ဤသို့ပြုရန်နည်းစနစ်များစွာရှိသည်။ အလွန်ထိရောက်သောနည်းတစ်နည်းမှာပထမ ဦး ဆုံးသင်လုပ်နေသည့်အရာနှင့်သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်၊ ထို့နောက်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ခန္ဓာအထူးသဖြင့်သင့်အသက်ရှူမှုကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် OCD သည်၎င်း၏ရုပ်ဆိုးသောမြည်းကို ၀ င်လိုက်လျှင်၊ အဆင့် ၁ သို့ပြန်သွားပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်အစပိုင်းတွင်ခဏကြာပေမည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာကြာလိမ့်မည်။ သင့်ကို OCD ပြောသည့်အရာသည်သင်္ချိုင်းတွင်းမှလိမ်လည်လှည့်စားသူဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ဒီယုံကြည်ချက်ကိုမစွန့်လွှတ်ပါနဲ့။ ဒီလိုမုသားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်မုသားကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်မကြိုးစားပါနှင့် - ၎င်းသည် OCD ၏ဂိမ်းဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ သင်အမှန်တရားကိုသိသောသင်၏နက်ရှိုင်းသောအသိပညာအပေါ်ခေါင်းမာမာဖြင့်မတ်တပ်ရပ်ပါ။ သင် ... လုပ်သည်။
အကယ်၍ OCD သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်မကြိုးစားပါက OCD ကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုမရနိုင်ပါဟုထင်သည်။ ငါမကြာသေးမီကသည်အထိဖြစ်ပျက်သောအရာကိုအဘို့ဤမျှလောက်မြင်ဘူး။ OCD ကိုယ်ပျောက်အပေါ်ရှင်သန်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ OCD တွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သမျှအဆိုးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတွဲရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ OCD ကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုထင်မြင်မိစေခဲ့လဲ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါဟာနှစ်တစ်သန်းအတွင်းမှာဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါသုတေသနလုပ်ပြီး OCD အကြောင်းလေ့လာခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကငါ့ OCD အဆုံး၏အစဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအနိုင်ရ!
ငါသည်အမြင့်မားစာအုပ်အကြံပြု အခုတော့ရဲ့ Power သုံးစွဲခြင်း OCD နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်မည်သူမဆိုရန်။ OCD မဟုတ်ရင်စိုးရိမ်အဖြစ်လူသိများကင်ဆာစိတ်ကူးယဉ်မှတဆင့်၎င်း၏ခံစားနေရသူ plagues ။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲ, OCD သင်ရောက်ရှိဖို့ရန်မ Avenue ရှိပါတယ်။ ငါနောက်ဆုံးမှာတစ်လုံလောက်အောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာစိတ်ကူးယဉ်၏ပါစေသွားလာရင်းရှိခြင်းပြီးနောက်, တဦးတည်းတံခါးပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့် OCD စိတ်ထဲမှာချွတ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်တစ်ချိန်ကအတွက်ပိုပြီးကျန်းမာစိတ်ကူးယဉ်ခွင့်ပြုပါရန်စတင်နိုင်ကြောင်းဆိုပါစို့လိမ့်မယ်။